မော်ရင်ဟို ပထမဆုံး ရှုံးပွဲ ကြံုတွေ့ခဲ့ ရတဲ့ ကြည်နူး စရာတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ ရတဲ့ ယူနိုက်တက်2– 1 စပါး ပွဲစဉ်မှ ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ အချက်5ချက် - SPORTS MYANMAR
မော်ရင်ဟို ပထမဆုံး ရှုံးပွဲ ကြံုတွေ့ခဲ့ ရတဲ့ ကြည်နူး စရာတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ ရတဲ့ ယူနိုက်တက်2– 1 စပါး ပွဲစဉ်မှ ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ အချက်5ချက်
By Edi Tor December 5, 2019
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ မနေ့ ညက အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် ကွင်းမှာ နည်းပြ ဟောင်း ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ရဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး အသင်း ကို ဧည့်ခံ ကစား ခဲ့ ရပြီး2– 1 ဆိုတဲ့ အနိုင် ရလဒ် ကို ရယူ နိုင် ခဲ့ကာ သုံးပွဲ ဆက် နိုင်ပွဲ ပျောက်ဆုံး နေမုှ ကို ရပ်တန့် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာတော့ ယူနိုက်တက် အတွက် သွင်းဂိုး တွေကို အခု တလော ပုံစံ ကောင်းတွေ ပြသ နေ ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ရပ်ရှ်ဖို့ ကပဲ သွင်းယူ ခဲ့ပြီး တော့တင်ဟမ် အတွက် တစ်လုံး တည်းသော ခြေပဂိုး ကိုတော့ မော်ရင်ဟို လက်အောက် မှာ ထူးထူးခြားခြား ပြန်လည် တောက်ပ လာခဲ့တဲ့ ဒီလီ အလီ က လှလှပပ သွင်းယူ သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ရလဒ် ဟာ တော့တင်ဟမ် နည်းပြ ဖြစ်လာ ခဲ့တဲ့ နောက် သုံးပွဲဆက် နိုင်ပွဲ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ရဲ့ ပထမဆုံး ရှံုးပွဲ ဖြစ်ခဲ့ ရပြီး ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား အတွက်တော့ သုံးပွဲဆက် နိုင်ပွဲ ပျောက်ဆုံး နေမှုကို ရပ်တန့် လိုက်ကာ ဖိအား အနည်းငယ် ကျဆင်း သွားခြင်း ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှ ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ အချက်5ချက်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
(1) ဟယ်ရီကိန်းထက် ပိုမို တောက်ပပြလိုက်တဲ့ ရပ်ရှ်ဖို့
ဟယ်ရီ ကိန်း ဆိုတာ ကလပ် အသင်း မှာသာ မက နိုင်ငံ လက်ရွေးစင် အသင်း မှာပါ ရပ်ရှ်ဖို့ ထက် အပုံကြီး သာလွန် လှသူ ကမ႓ာ့ အဆင့် တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦး ပါပဲ ။ သူဟာ ကစား ပေးတဲ့ အသင်း တွေမှာ အမြဲ နံပါတ် တစ် ဦးစားပေး တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်နေ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ နှစ်ဖက် အသင်း မှာ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် တွေ တိုက်စစ်မှူးတွေ ပါဝင် ကစား ခဲ့ ကြတဲ့ အချိန် ရပ်ရှ်ဖို့ က သွင်းဂိုး နှစ်ဂိုး သွင်းယူ လိုက်ခြင်း နဲ့ အတူ လက်ရွေးစင် အသင်းဖော် ကိန်းကို မှေးမှိန် သွားစေ ပါတယ် ။
ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ ရပ်ရှ်ဖို့ ဟာ ပြိုင်ဖက် ခံစစ် နဲ့ ဂိုး သမား တွေကို အထူး ဒုက္ခ ပေးနိုင် ခဲ့ပြီး အသင်း အတွက် ဒီလ တွေမှာ အကျိုး အပြု နိုင်ဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ကြောင်း ၊ ခြေစွမ်း ၊ သွင်းဂိုး တွေနဲ့ အတူ သက်သေ ပြသွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဘအခြား တစ်ဖက် မှာတော့ ဟယ်ရီ ကိန်းဟာ နည်းပြ သစ် ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို လက်အောက်မှာ ကွင်းလယ် ကစားသမား တွေရဲ့ ဂိုးသွင်းယူ နိုင်မုှ တွေကြောင့် ယခင်လို ဂိုးသွင်း စွမ်းရည် ပြသ နိုင်ဖို့ ရုန်းကန် နေခဲ့ရ ပါတယ် ။
(2) လမ်းကြောင်း အမှန်ပေါ် အလီ သေချာပေါက် ရောက်ပြီ
ကလပ် အသင်း အတွက် ပုံစံ ကောင်းတွေ ပြသ နိုင်ဖို့ ရုန်းကန် ခဲ့ရခြင်း က အလီ ကို လက်ရွေးစင် အသင်း မှာ နေရာ ပျောက်စေ ခဲ့ ပါတယ် ။ သူဟာ နည်းပြ ပိုချက်တီနို လက်အောက် မှာ ခြေစွမ်း မပြ နိုင်ခဲ့ မှု တွေကြောင့် ပွဲထွက် ခွင့် ရရှိ ဖို့တောင် အထူး တိုက်ပွဲ ဝင်နေ ခဲ့ရ သူပါ ။
ဒါကြောင့်လည်း ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို တော့တင်ဟမ် ဆီ ပြောင်းရွှေ့ လာပြီး နောက် ချက်ချင်းပဲ အလီ ကို ပွဲထွက် ကစား စေခဲ့ ခြင်းက ရူးကြောင်ကြောင် နိုင်တဲ့ လုပ်ရပ် တစ်ခု လို့ ထင်မြင်ချက် ပေးချင် သူတွေ ရှိခဲ့ ကြတာ ပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် မော်ရင်ဟို ဟာ အလီ ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းရည် တွေကို ဆွဲထုတ် ပြနိုင် စေခဲ့ ပါပြီ ။ အလီ ဟာ မော်ရင်ဟို ရဲ့ လက်အောက် မှာတော့ ပွဲတိုင်း အသင်း ရဲ့ သွင်းဂိုး အများစုနဲ့ တစ်နည်း မဟုတ် တစ်နည်း ပတ်သက် နေခဲ့ သလို ယုံကြည် အားထားနိုင်ဖွယ် ခြေစွမ်းလည်း ပြနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါဟာ အင်္ဂလန် နည်းပြ ဆောက်ဂိတ် နဲ့ တော့တင်ဟမ် ပရိသတ် တွေ အတွက် တော့ အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်စေ လွန်းတဲ့ သတင်းကောင်း တစ်ခု ပါပဲ ။ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲမှ အလီ ရဲ့ သွင်းဂိုး က တစ်ကယ် ပဲ လှပ သေသပ် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
(3) ဟိုဆေး ကို ချစ်နေ ကြသူများ
အသင်း အတွင်း မလိုလား အပ်တဲ့ ပြသနာ အချို့ ၊ ရလဒ် တွေ ဆိုးရွား ခဲ့မှု တွေကြောင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း မှ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ထွက်ခွာ ခဲ့စဉ် တုန်းက ဝမ်းနည်း ပူဆွေး ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် တွေ များပြား ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အခုလို အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် ဆီ ပြိုင်ဖက် နည်းပြ အဖြစ် ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာချိန် မှာတော့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် တွေက ယူရို ပါလိဂ် ၊ လိဂ် ဖလား နဲ့ အမှတ်ပေး ဖလား ပြိုင်ပွဲ မှာ အဆင့်2နေရာ အထိ ရယူ ပေးနိုင် ခဲ့တဲ့ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ကို နွေးထွေး ပျူငှာမှု တွေနဲ့ အတူ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြိုဆို နှုတ်ဆက် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ထို့အတူ မော်ရင်ဟို ကိုယ်တိုင် ကတည်း တပည်းဟောင်း နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဟောင်း တွေကို ဖက်လှဲ တကင်း နှုတ်ဆက် ခဲ့ သလို အသင်းဟောင်း တွေနဲ့ တွေ့ဆုံလေ့ ရှိတဲ့ အခါတိုင်း ပြသလေ့ ရှိတဲ့ သူရဲ့ သံယောဇဉ် တွေကို အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် ကွင်းမှာလည်း ပြသ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့တာ တွေထက် ပိုပြီး ထူးခြား ခဲ့တဲ့ အရာ တစ်ခု ကတော့ နိုင်ပွဲ ဆာလောင် နေခဲ့ ကြတဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် တွေဟာ နည်းပြဟောင်း ဖြစ်သူ နဲ့ တွေ့ဆုံ ရတဲ့ ပွဲမှာ ဖိအား တွေအောက် ကျရောက် နေတဲ့ လက်ရှိ နည်းပြကို ထောက်ခံ အားပေး မှုတွေ ဝိုင်းဝန်း ပြုလုပ် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဆိုးလ်ရှားအောက် ဆိုတဲ့ စိတ်ပျက်ဖွယ် အခိုက်အတန့် တွေကို ပိုင်ဆိုင် နေတဲ့ နည်းပြ အတွက် ဘယ်လောက် အဓိပ္ပါယ် ရှိသလဲ ဆိုတာ ကွင်းထဲမှ သူ့ရဲ့ အပြုံး တွေက သက်သေ ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
(4) လိုရစ်ကို လွမ်းနေဦးမလား !!
ဘယ်လို အသင်း အတွက်ပဲ ဖြစ်နေ ပါစေ ၊ ဟူဂို လိုရစ် လို လက်စွမ်း ကောင်းလှသူ ၊ အတွေ့ အကြံု ကြွယ်ဝ လှသူ ကမ႓ာ့ ချန်ပီယံ တစ်ဦး ကို ဆုံးရှံုး ရခြင်း က တစ်ကယ့် ကို နစ်နာ လွန်းတဲ့ အရာ တစ်ခု ဖြစ်နေ မှာ အသေအချာ ပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် မှာ တော့တင်ဟမ် ရဲ့ ဂိုးပေါက် အရှေ့ ရှိနေ ခဲ့တဲ့ ဂတ်ဇာနီဂါ ကတော့ လိုရစ် ကို သတိရ စေမှာ မဟုတ်တာ အသေအချာ ပါပဲ ။ သူဟာ ပြိုင်ဖက် အသင်းကို အဖွင့်ဂိုး ပေးခဲ့ ရတဲ့ အချိန် အားနည်း ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ပွဲချိန် တစ်လျောက် မှာတော့ ရပ်ရှ်ဖို့ ၊ ဒန်နီယယ် ဂျိမ်းစ် နဲ့ မာဆွန် ဂရင်းဝုဒ် တို့ရဲ့ ဂိုး ဖြစ်သွား နိုင်မယ့် ကန်ချက် တွေကို ကာကွယ် ပေးရင်း သူဟာ အထူး တောက်ပ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကို တော့တင်ဟမ် အသင်း ရဲ့ ပရိသတ် တွေ နှစ်ခြိုက် နေမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။ ဒါဆို ဒီနေ့ ပွဲကို ကြည့်ပြီး နောက် လိုရစ် ကို လွမ်းနေ ဦးမှာလား ???
(5) ဟယ်ရီ နှစ်ယောက် ထိပ်တိုက် တွေ့ကြရာဝယ် …
ဟယ်ရီ မက်ဂွားယား နဲ့ ဟယ်ရီ ကိန်း တို့ဟာ ယူရို 2020 မှာ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် အထူး အားကိုး လို့ ရနိုင်မယ့် အဖိုးတန် ကစားသမား နှစ်ဦး ပါပဲ ။ ဒါကို သံသယ ဝင်နေဖို့ မလိုအပ် ပါဘူး ။ ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ သူတို့ ဟာ ပြိုင်ဖက် အဖြစ် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒီပွဲ မှာတော့ မက်ဂွားယား ဟာ လက်ရွေးစင် အသင်းဖော် ဖြစ်သူ ကိန်း ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ် ဟန့်တား ပြသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ကိန်းဟာ ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာ ဂိုးပေါက် ကန်သွင်း ခွင့်တွေ ရရှိ နိုင်ဖို့ တောင် အတော်ကြီး ကြိုးပမ်း ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ကိန်းဟာ ယူနိုက်တက် ဖက်ကို ဖရီးကစ် ကန်ချက် ကနေပဲ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ပေးစွမ်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။